Global Voices teny Malagasy » Hitsidika an’i Mozambika mandritra ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana amin’ny volana Septambra ny Papa Fransoà · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Avrily 2019 5:48 GMT 1	 · Mpanoratra Dércio Tsandzana Nandika (en) i Liam Anderson, Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Mozambika, Fifidianana, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Vaovao Tsara
Papa Francisco | Gabriel Trujillo – Lisansa-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)
Hitsidika an'i Mozambika amin'ny volana Septambra 2019 ny Papa Fransoà, herinandro vitsy monja mialoha ny fifidianana izay ho filoham-pirenena vaovao, ho mpikambana ao amin'ny Antenimiera Repoblikana ary ny ho governoran'ny faritra .
Nasain'ny filoha Mozambikana Filipe Nyusi ny Papa tamin'ny volana Septambra 2018. Nambara ity fitsidihana ity araka ny nohamafisina ny 26 Martsa teo nandritra ny lanonana manetriketrika izay nahitana ny sampana avy amin'ny Fiangonana Katolika ao amin'ny firenena.
Nilaza ny filoha Nyusi fa hanampy amin'ny fanamafisana ireo dinika fandriampahalemana miaraka amin'ny antoko mpanohitra RENAMO, izay nanatsahatra ny fifandonana ara-tafika tamin'ny governemanta tamin'ny taona 2017 ny fitsidihan'ny Papa, mbola ao anatin'ny fihenjanana tanteraka izany dingana izany. Nanampy izy fa izany koa no fotoana handinihana momba ny fifandonana amin'ireo vondrona milisy  mihetsika any avaratry ny firenena, indrindra any amin'ny faritanin'i Cabo Delgado.
I Joany Paoly faharoa no Papa farany nitsidika an'i Mozambika tamin'ny volana Septambra 1988.
Efa nandrasana hatramin'ny tapaky ny volana Febroary ny fanamafisana ny fitsidihan'ny Papa. Hikarakara ny fifidianana amin'ity volana Oktobra  ity i Mozambika ary mbola ao anatin'ny fanarenana ny faharavana tamin'ny Rivodoza Idai  izy, izay nahafatesan'olona miisa 500 ary olona mihoatra ny iray tapitrisa no tsy manan-kialofana. Naneho ny firaisankina tamin'ireo niharam-boina ny Papa:
Maneho ny hirifiriko sy ny firaisankinako amin'ireo vahoaka malala any Mozambika, Zimbaboe ary Malawi aho, izay nandalovan'ny Rivodoza Idai. Ankiniko ho amin'ny famindram-pon'Andriamanitra ireo tra-boina tsy hita isa sy ny fianakaviany.
Ny loza vokatry ny rivodoza, izay efa nosokajiana ho iray amin'ireo ratsy indrindra namely ny Ila Bolantany Atsimo, dia namely ny tanàndehiben'i Beira ao afovoan'i Mozambika tamin'ny 14 Martsa, ary avy eo namely ireo firenena mpifanolo-bodirindrina ao Zimbaboe sy Malawi. Maherin'ny 300 ireo olona maty tany amin'ireo firenena roa ireo.
Nijanona tao anatin'ny hamehana ny firenena nanomboka teo, izay nitarika ny governemanta hamerina hijery indray ny kalandriem-pifidianana sy hanemotra ny fe-potoana fisoratana anarana.
Tao anatin'ny loza nitranga, mbola niezaka nanazava ny fomba hamonjena sy hanomezana toeram-pialofana ireo olona an-jatony taorian'ny Rivodoza Idai ny governemanta. Nanao fanambaràna MIVANTANA tao amin'ny fahitalavitra ny filoha Nyusi ho an'ny firenena mba hanambara fa hitsidika an'i Mozambika ny Papa amin'ny volana Septambra. Nambara tao anatin'ny fotoana tsy tokony hilazana azy .
Nampametram-panontaniana ny olom-pirenena sasany ny zava-misy fa hatao fotoana fohy aorian'ny fitsidihan'ny Papa ny fifidianana satria miahiahy ny olona fa mety hisy fiantraikany amin'ny fampielezan-kevitra izany:
Mazava fa hanohana an'i Frelimo sy Filipe Nyusi ny fitsidihan'i Papa François amin'ny volana Septambra. Hahazoana tombontsoa ara-politika na mivantana na tsy mivantana ny fitsidihana. Tsara kokoa raha nahemotra amin'ny volana Novambra izany, izany hoe aorian'ny fifanjevoana amin'ny fifidianana ankapobeny izay atao ny 15 Oktobra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/14/136925/
 vondrona milisy: https://pt.globalvoices.org/2018/07/06/riquezas-naturais-cercadas-pelo-terror-o-que-explica-os-ataques-no-norte-de-mocambique/
 Hikarakara ny fifidianana amin'ity volana Oktobra: https://pt.globalvoices.org/2019/03/08/o-que-ja-se-sabe-sobre-as-proximas-eleicoes-gerais-em-mocambique/
 Rivodoza Idai: https://pt.globalvoices.org/2019/03/20/ciclone-idai-em-mocambique-cidade-da-beira-de-500-mil-habitantes-foi-quase-toda-submersa/